किन एक्लिए कपिल शर्मा ? - dastawejdastawej
एक समय थियो बलिउडका ठूला हस्तीहरु समेत कपिल शर्माको हास्य कार्यक्रममा आउनका लागि मरिहत्ते गर्ने गर्थे । आम मानिसदेखि प्रख्यात हस्तीहरुसम्म उनको कार्यक्रममा आउन चाहन्थे । स्वयम् कपिलले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो, म अमिताभ बच्चन र नरेन्द्र मोदीलाई यो कार्यक्रममा ल्याउन चाहन्छु । यदि कपिलको सफलताको ग्राफ त्यही गतिमा अघि बढेको भए मोदीसँग उनको कार्यक्रममा साक्षात्कार समेत शायद पूरा हुन्थ्यो कि ? तर त्यसो भएन ।
मानिसको जीवनमा यसरी एकाएक देखिने सफलता र बटुलिने चर्चापछिको समय महत्वपूर्ण हुन्छ । कपिलका हकमा पनि यही देखिएको छ । अहिले भने कपिल शिखरमा एक्लो देखिएका छन् । उनको सबैभन्दा ठूलो पूँजी मानिने उनका सहयात्रीहरु समेत एकपछि अर्को उनलाई छोडेर हिँडेका छन् । सफलताले विवादलाई पनि सँगै बोकेर आउँछ भन्छन् ।
उनका अर्का साथी सुनिल पाल पनि उनलाई निकै मनकारी भएको बताउँछन् । सुनिलका अनुसार, अहिले कपिललाई नियोजित तरिकाले विवादमा ल्याउन खोजिएको हो । विगतमा कपिलको क्यारिअर सफलताको उचाईमा रहेको बेला कपिलले आफ्ना कैयन बेरोजगार साथीहरुलाई शो मा रोजगारी दिएको र कैयन लेखकहरुलाई समेत सहयोग गरेको उनले बताएका छन् ।
सन २००७ मा लाफ्टर च्यालेन्ज–३ जिते कपिलले । यहीँबाट उनले सानो पर्दाको उध्योगमा आफ्ना पाइला अघि बढाए । सन् २०१३ मा ‘कमेडी नाइटस विथ कपिल’ सुरु गर्नु अघि उनी कमेडी सर्कसमा काम गर्थे ।
यति छोटो समयमा उनले कमाएको लोकप्रियता धेरैलाई पाच्य नहुन सक्छ । ‘पब्लिक फिगर’ भएकाहरुलाई आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत जीवनदेखि पेशागत र समाजमा हैसियत जोगाउन मुस्किल परेकाे देन्खिन्छ । आफ्नो हैसियतलाई सधै ख्याल गर्न नसक्दा थुप्रै कलाकारहरू पछुताउनु परेका थुपै्र उदाहरण छन् । कपिलले पनि आफुबाट भएका कमीकमजोरीहरुलाई आत्मआलोचना गर्दै उही जोस र होसका साथ आफूलाई दौडाउनुको कुनै विकल्प छैन ।